कामना सेवा र जनरल इन्स्योरेन्सबीच बैंकासुरेन्स सम्झौता
काठमाण्डौ । ज्ञानेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडबीच बैंकासुरेन्स सेवा आदानप्रदा गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । यस सम्झौताअनुसार अब यस बैंकका ग्राहकहरुले मुलुकभर फैलिएका ६२ वटै शाखाहरुबाट सहज रुपमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको निर्जीवन बीमा पोलिसिहरु...
कामना सेवाको ६२ औं शाखा कलंकीमा
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो सेवाविस्तारको क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाको रिङरोड कलंकीमा पुस १६ गते ६२ औं शाखा स्थापना गरी कारोबार शुभारम्भ गरेको छ । बैंकका अध्यक्ष सुदिप आचार्य, संचालकद्वय देवकृष्ण काफ्ले र संचालक विश्वेश्वर सुवेदी तथा कामु प्रमुखकार्यकारी अधिकृत प्रविण बस्नेतले संयुत्त रुपमा कारोबार...
कामना बैंकद्वारा आमा समूहलाई डस्टबिन प्रदान
काठमाण्डौ । कामना सेवाविकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पोखरा–२ अर्चलबोटस्थित “अर्चलबोट आमा समूह”लाई एक कार्यक्रमका बीच डस्ट्विन लगायतका सरसफाइका सामाग्री प्रदान गरेको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष रामेश्वर मल्लकाो अध्यक्षतामा आयोजित एक समारोहबीच बैंकका सञ्चालक सदस्यद्वय...
न्यूरोडमा कामना सेवा बैंकको ६१ औं शाखा
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंक लिमीटेडले आफ्नो सेवा विस्तारको क्रममा काठमाण्डौ महानगरपालिका खिचापोखरीस्थित न्युरोडमा आफ्नोे ६१ औं शाखा स्थापना गरी कारोबार शुभारम्भ गरेको छ । बैंकका अध्यक्ष सुदीप आचार्य, संचालक विश्वेश्वर सुवेदी तथा काम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण बस्नेतले एक समारोहका बीच सो शाखाको कारोबार संयुक्त रुपमा...
कामना सेवाको नाफामा छलाङ, सबै सूचक मजबुत
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंक लिमीटेडले खूद नाफामा ९४.४५ प्रतिशतको छलाङ हानेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमासमा बैंकको खूद नाफा ९४.४५ प्रतिशतले बढेर ३४ करोड ३३ लाखको उचाईमा पुगेको हो । अघिल्लो वर्ष बैंकको खूद नाफा १७ करोड ६५ लाखमा सीमित थियो । संभावित जोखिम व्यवस्थापनबाट १५ करोड ३१ लाख राइटब्याक गरेर यो बैंकले नाफा बढी...
कामना सेवा बैंकको डबल अफर: बोनस सेयरको साथमा नगद लाभांश पनि
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई पहिलोपटक बोनस र नगद लाभांश वितरणको घोषणा गरेको छ । बैंकको जेठ ३० गते बसेको २४९ औं बैठकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफा तथा अन्य वितरणयोग्य कोषहरुबाट सेयरधनीलाई ५.५० प्रतिशत बोनस सेयर र ६.५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको निर्णय गरेको हो । हाल यो बैंकको चुक्तापूँजी २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ...
कामना सेवा बैंकको ८.४९ लाख कित्ता हकप्रद लिलामीमा, सस्तोमै सेयर पाउने अवसर
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंकले ८ लाख ४९ हजार ९ सय ६३.७७ कित्ता सेयर लिलामीबाट बिक्रीका लागि सूचना प्रकाशित गरेको छ । राष्ट्रिय स्तरको यो विकास बैंकले बैशाख २४ गते(आज)बाट संस्थापक र सर्वसाधारण समूहतर्फ नबिकेको सेयरको लिलामीबाट बिक्रीका लागि आवेदन खुलाएको हो । कम्पनीले गत माघ १५ देखि चैत ५ गतेसम्म ३० लाख ९४ हजार १ सय ५४.७७ कित्ता...
काठमाडौँ । चालू आर्थिक वषको तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा कामना सेवा विकास बैंकको प्रगति उत्साहप्रद देखिएको छ । भारी चुक्ता पूँजीसँगै जगेडा कोषसमेत वृद्धि गरको बैंकले यस अवधिमा २२ करोड ८१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत वर्षको भन्दा बैंकले करीव ५७ दशमलव ६२ प्रतिशतले बढी हो । गतवर्ष सोही अवधिसम्म बैंकले १४ करोड ४७ लाख ४५ हजार खुद...
बिक्नै छाड्यो हकप्रद, म्याद थप्नुको हैरानी !
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकको पूँजीवृद्धिको नीतिका कारण लगानीकर्तालाई हकप्रदको थामिनसक्नु भारी बोकाउने क्रम अझै उस्तै छ । हकप्रदबाटै तोकिएको पूँजी पुर्याउने पक्षमा बैंक तथा बित्तीय संस्था रहे पनि उनीहरुले अपेक्षा गरेजस्तो हकप्रद सहजै बिक्री हुन छाडेको छ । यही समस्याका कारण हकप्रदमा आवेदन दिने म्याद थप्नुुको हैरानीमा छन् बैंक तथा...
कामना सेवा बैंकले १५% हकप्रद निश्कासन गर्ने
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंक लिमीटेड १५ प्रतिशत हकप्रद निश्कासनको माग गर्दै धितोपत्र बोर्ड पुुगेको छ । राष्टिय स्तरको यो विकास बैंकले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ३० लाख ९४ हजार १ सय ५४.७७ कित्ता हकप्रद निश्कासनको माग गर्दै बोर्डमा आवेदन दिएको हो । कम्पनीको हकप्रद निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम एनएमबी क्यापिटल लिमीटेडले...
कामना बैंकमा पनि आश्वास निःशुल्क
काठमाण्डौ । अब कामना सेवा विकास बैंकले पनि एप्लीकेसन सर्पोटेड बाई ब्लक्ट अमाउण्ट(आस्वा) सेवालाई निःशुल्क बनाएको छ । बैंकले बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै आफ्ना सबै ४० वटै शाखा कार्यालयबाट आस्वा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध हुने जनाएको हो । यसअघि यो बैंकले आस्वा सेवा लिंदा सामान्य शुल्क लिन्थ्यो। कामना सेवा विकास बैंक अगाडि अधिकांश...
कामना सेवा बैंकले किन बोलायो विशेष साधारणसभा ?
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंकले आगामी कात्तिक १ गते बुधबारका दिन विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । यो बैंकले नेपाल राष्ट्रबैंकले तोकेको समयभित्र तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्याउन हकप्रद निश्कासनको प्रस्ताव पारित गर्न विशेष साधारणसभा आह्वान गरेको हो । असोज ९ गते बसेको संचालक समितिको २३६ औं बैठकले पोखराको बिरौटास्थित होटल पोखरा...
आजदेखि कामना सेवा बैंकको सेयर लिलामी खुल्ला
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंकको सेयर सस्तोमै उठाउने अवसर आजदेखि खुलेको छ । यो बैंकले संस्थापकतर्फको ४२ हजार १२०.३४ कित्ता र सर्वसाधारण समूहतर्फको १ लाख ३३ हजार २ सय ३८.२६ कित्ता सेयर लिलामीबाट बिक्री गर्ने उद्देश्यले शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको हो । कामना सेवा बैंकको अबितरित सेयर निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम एनआइबिएल...
भदौ ११ देखि कामना सेवाको सेयर सस्तोमै पाइने !
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंकको सेयर सस्तोमै उठाउने अवसर खुलेको छ । यो बैंकले संस्थापकतर्फको ४२ हजार १२०.३४ कित्ता र सर्वसाधारण समूहतर्फको १ लाख ३३ हजार २ सय ३८.२६ कित्ता सेयर लिलामीबाट बिक्री गर्ने उद्देश्यले शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको हो । कामना सेवा बैंकको अबितरित सेयर निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम एनआइबिएल...